Zvinokuvadza munzvimbo ye grey vhezheni yeApple Watch Sport | IPhone nhau
Zvikanganiso munzvimbo ye grey vhezheni yeApple Watch Sport
IPad nhau | | Apple Watch, Noticias
Vamwe vashandisi veApple Watch vari kuita dzimwe nyaya neiyo Apple logo kumashure kwavo zvishandiso. Sezviri pachena, inenge ichinyangarika kana kudzima zvishoma, mukuwedzera pakuonekwa kumwe kukwenya kana kukanganisa mune zvinyorwa zvinoitenderedza. Izvi zviri pachena kubva kunyunyuto uye zvirevo zvekuti vashandisi veApple smart wachi vari kutsikisa paInternet.
Zvinetso zvinoita kunge zviri kuitika kwemwedzi mishoma. Zvimwe zvinotumirwa paReddit social network zvinoratidza mienzaniso yekuti logo irikuseri kweApple Watch inoratidza sei kusakwana kana kukwana kusarongeka. Zvakare, vhiki rapfuura, chakatumirwa nemushandisi pamaforamu eApple ekutsigira chakaratidza mhando imwechete yedambudziko.
Mumwe munhu akaunza izvi kutafura yeApple yekubatsira uye yekutsigira sevhisi akabatwa neiyo yakasarudzika webhusaiti AppleInsider. Akataura kuti akagamuchira runhare kubva kune mumwe munhu kubva kukambani achipindura dambudziko rake iro ravakavimbisa kuti chishandiso chinotsiviwa nechimwe chitsva pasina muripo, kuitira kuti mainjiniya eApple vadzidze dambudziko iri zvakanyanya. Kuti uenderere mberi nekuongorora kukuvara kwewachi, mumiriri weApple akabvunza mutengi nezve mamiriro ekunze munzvimbo, nhanho dzekuita dzakatsigirwa nechishandiso uye kana yakanyudzwa mumvura. Uye zvakare, akaratidzira zvakare kuti vamwe vanhu vaive vaudzawo matambudziko akafanana asi izvo zvakangoitika pamwe neyegrey grey Sport vhezheni.
Sezvineiwo, ese mayuniti ane akaremara anoenderana nemhando iyi yewachi, izvo zvinoratidza kuti dambudziko rinomuka nemavara anodhindwa pane iyi modhi yeApple Watch Sport. Isimbi dzesimbi mawatch ane iwo mavara akanyorwa pane akadhindwa, pamwe ndipo panobva mabara ematambudziko ari kutaurwa anobva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvikanganiso munzvimbo ye grey vhezheni yeApple Watch Sport
Uye izvi zvichatsiva mawadhi ekutanga here? Ndiri fan guru reapuro, asi mudziyo uyu unofananidzwa newadhi yepamberi? Mhoro? Ini handipe mbiri, izvo hazviitike kunyangwe kune yakashata Lotus ... Zvisinei ...
Wanga uine mashoma Lotus ...
Apple iri kudzidza kuti dambudziko nderei uye zvinoenderana neavo vakazvikanganisa ivo vanotaura pamusoro pemaforamu, Apple iri kuvapa iyo yekutsiva.
Usataure nezve izvo zvausingazive, zvisina hunhu. Uri kuzondipa makirasi ekugadzira mawachi, iwe unogona kundiudza kuti hauna kudzidza uye kuti iro apuro diki rinokuita kunyura.
Uchitenda kana kwete, ndakatenga iyo Apple Watch munaJune 26 muPuerta del Sol uye izvo zvaunotaura zvakaitika kwandiri. Ndakafonera AppleCare vakati ivo vari kuenda kunoona zvavanogona nekuti AppleCare haifukidze zvikanganiso zve "cosmetic". Ndakakatyamadzwa kana zvichinyatsoonekwa kuti idambudziko rekuora kwependi iro rave kushandiswa pane iyo aluminium adonization. Zvidimbu zvewachi zvinodonha sezvazviri. Yangu yatorasikirwa neapuro uye iri kupararira kumavara.
Ini ndaizoenda ndakananga kuApple Store kunogunun'una. Zvinotaridza kuti Apple iri kupa iyo yekutsiva, zvirinani ndizvo zvinotaurwa nevanhu vane njodzi vari kuitsikisa painternet.
Ini ndanga ndiri mumwe weavo vakakanganiswa, pandakafonera Apple Care "vakati" hapana chavanoziva uye kuitumira kuti vagone kuchidzidza. Vakaguma vachindipa imwe nyowani asi kubva pane zvandiri kuverenga pane zviitiko umo zvakatsiviwa neimwe nyowani uye zvakaitika zvekare.
Zvinondipa kuti vanopenga kana zvichinzi vanokuudza kuti hapana chavanoziva asi ivo vanoziva, kune mazana emawachi akachinja nekuda kwedambudziko iri uye kubva pane zvinoonekwa, kunyangwe vachizozvichinja, zvichaitika kwauri zvakare kuve kukundikana kwekugadzira kana zvikasagadziriswa kunyangwe vazvichinja zvakadii, zvicharamba zvichiitika
Kana zvikaitika kwandiri zvakare, ndiri kuzoda yemhando yepamusoro, hazvibvumirwe kuti izvi zviri kuitika uye ndinofunga kuti vezvenhau vanofanirwa kudzokorora nhau idzi kuti vaise mhinduro kamwe chete uye vese kwete kutirwisa
Pindura kuna Uli
Zvakaitikawo kwandiri uye vakandiudza muApple kuti handinetseke kuti vachazvigadzirisa asi ndinofunga zvakafanana kana vakaigadzirisa uye mushure memwedzi miviri zvakangofanana isu tiri nenzira imwechete yavaizofanira tipei yemhando yepamusoro nekuda kweiyo shit hazvigone kuve kuti wachi yeinosvika € 500 mushure memwedzi miviri yekusuwa pazasi ini ndanga ndine ma casios akandigara kwemakumi emakore uye akakwana
Zvinodhura zvakadii uye zvine pundutso zvakadii kutenga iyo iPhone 6? [Global infographic]